Howlgalo aan caadi ahayn oo maanta ka socda degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Howlgalo aan caadi ahayn oo maanta ka socda degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho
Ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta howlgalo culus ka bilaabay qeybo ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, iyadoona howlgalkaasi durbadiiba lagu soo qab-qabtay dad aad u badan.
Howlgalkaasi oo aad u culus ayaa ah mid ay ciidankaasi ku baarayaan guryaha iyo goobaha ganacsi ee ku yaala degmada Wadajir, waxayna sidoo kale ciidankaasi maanta xanibeen dhamaan ganacsigii iyo isku socodkii ka jiray degmadaas.
Ilaa iyo haatan lama oga uljeedka rasmiga ah ee ka dambeeysa howlgalka maanta ka socdo degmada Wadajir, balse warar hoose oo aynu helnay ayaa sheegaya in howglkaan uu qeyb ka yahay qorshe ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku sugto ammaanka magaalada Muqidsho, inta lagu guddo jiro bisha barakeeysan ee Ramadaan.
Dhinaca kale, warar kale oo aynu helnay ayaa inoo sheegaya in howlgalkaan uu ka dambeeyay kadib markii ciidanka lagu soo wargeliyay in qeybo ka mid ah degmadaasi Wadajir ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-shabaab.
Xubnahaasi Al-shabaab ka tirsan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa loo qorsheeyay inay weeraro ismiidaamin ah ka geystaan xarumaha dowladda iyo goobaha ay dadka shacabka ah isugu yimaadaan xilliga lagu guddo jiro bisha barakeeysan ee Ramadaan, taas oo keentay inay ciidankaasi bilaabaan howlgaladaan culus.
Si kastaba ha ahaatee, howlgalkaan ayaa kusoo beegmayaa xilli ay nagu soo fool-leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana muuqata in ciidankaasi ay bilaabeen howlgalo lagu baacsanayo xubnaha ka tirsan Al-shabaab ee ku dhuumaaleysanayo guryaha ku yaala magaalada Muqdisho.